Farmaajo oo ogolaaday dalabka Axmed Madoobe | KEYDMEDIA ONLINE
15 May 2021 Taliyaha AFRICOM oo fariin u gudbiyay Axmed Madoobe
15 May 2021 Keydmedia oo xuseysa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed (SYL)
15 May 2021 Ciidan tababar kusoo qaatay Jabuuti oo dib usoo laabtay
15 May 2021 Rooble iyo Caleema Saarka Geellaha Jabuuti
15 May 2021 RW Rooble oo ballanqaad u sameeyay dhalinyarada
15 May 2021 Caleema-saarka Geelle oo kala qeybisay xulufadda Abiy
15 May 2021 Sidee Rooble ku kasban karaa Kalsoonida Mucaaradka?
14 May 2021 Mahad Karatay oo DF hore u sheegtay in la dilay oo soo hadlay
14 May 2021 Kenya oo diyaarado u direysa Soomaaliland
14 May 2021 Xaafiiska Farmaajo oo kala furfuraya Ciidanka Xoogga Dalka
14 May 2021 Farmaajo oo sii xumeeyay xiriirka Jabuuti iyo Soomaaliya
14 May 2021 Faragalinta Farmaajo ku hayo arrimaha doorashada
14 May 2021 RW Rooble oo buuxinaya kaalintii Farmaajo
14 May 2021 Qoor-Qoor oo gaaray Cadaado si uu u xaliyo xiisado colaadeed
14 May 2021 DF oo beenisay eedeymo kaga yimid guddiga fatahaadaha Hirshabeelle
13 May 2021 RW Rooble oo sii wada kulamada mucaaradka
13 May 2021 SAWIRRO: Sidee looga ciiday Maanta gobollada Soomaaliya?
13 May 2021 DF oo aan wali meel ku sheegin ciidankii loo qaaday Eritrea
13 May 2021 Maxay Dowladda Fadaraalka u diidday Ergeyga Midowga Africa?
12 May 2021 Hirshabeelle oo eedeysay wasiirro ka tirsan Xukuumadda Rooble
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sameeyay tanaasul si uu u qanciyo Axmed Madoobe, isagoo ogolaaday in Ciidamadda dowladda laga soo saaro Gedo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kahor inta uusan furmin kulanka maanta, Farmaajo iyo Axmed Madoobe ayaa isku afgartay inay guddi isku dhaf ah magacaabaan, kaasoo ka shaqeynaya sidii Ciidanka dowladda looga soo qaadi lahaa gobolka Gedo, oo horaantii sanadka la geeyay.
Arintan ayaa kamid ah shuruudaha Axmed Madoobe hordhigay Farmaajo markii uu Muqdisho tagey todobaadkii hore, isaga iyo Deni si ay Farmaajo ugala hadlaan danahooda gaarka.
Kulankan oo ay horey u shaacisay Villa Soomaaliya habeenka Arbacada ayaa la baajiyay daqiiqadii ugu dambeysay iyadoo shuruudo cusub ay ka soo baxeen Jubbaland.
Shuruudaha uu soo bandhigay Madoobe ayaa waxaa kamid ahaa ka bixitaanka Ciidamada dowlada Federaalka ee gobolka Gedo. Lama oga inuu Farmaajo u fulin doono Axmed Madoobe balad-qaadka uu u sameeyay.
Ciidamada ayaa la geeyay gobolka bilo kahor si ay u ilaaliyaan amniga, iyagoo dagaal adag la galey askar daacad u ah wasiirka amniga ee Jubaland, Cabdirashiid Janan oo January 2020 ka baxsaday xabsi ku yaalla Muqdisho.
Dagaalkii Ciidanka Jubbaland iyo kuwa DF ee ka dhacay Beled-Xaawo oo ku dhow Kenya sanadkan wuxuu sababay argagax, iyadoo dadka deegaanka ay ka carareen guryahooda.
0 Comments Topics: alshabaab axmed madoobe farmaajo gedo